[CUDUDAAR: Bahda SomaliTalk waxay u cududaarayaan walaalkeen qoraaga casharada Saxaabada, Ibraahim Saalax, oo safar ku maqnaa awgeed casharadii ay baaqdeen toddobaadadii lasoo dhaafay. Hadda kaddib sidii caadadu ahayd ayey casharadu kusocondoonaan, waa labadii toddobaadba mar, insha Allah.
MAHADNAQ: Bahda SomaliTalk waxay mahad ballaaran u jeedinayaan dhammaan akhristayaasha sida joogtada ah ugu xiran casharadan, akhristayaashaas oo had iyo jeer qorayaasha ku dhiirigeliya inay siiwaan casharada siirada Rasuulka (scw), Habnololeedkii saxaabada rasuulka, Ahmiyada salaada iyo qaybaha kale ee diinta Islaamka . Mahadsaidin dhammaan.] Waana kan casharkii saxaabada ee maanta.
SU'AALO KUSAABSAN: ABUU DAR AL QHIFAARI